Hlanza isikhumba enempilo - iphupho cishe njalo wesimanje. Kodwa, ngeshwa, sonke sibhekana ekuveleni ubuso ukukhubazeka encane. Kungenzeka imibimbi, iyiphi engavamile futhi, yebo, nezinduna encane, okuyizinto futhi uzobe okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Abahlukahlukene ukuqubuka, ngokuvamile ziqala ukuvela entsheni. Ngezinye izikhathi le nkinga uyakuhlupha ladies iminyaka eminingi. Kodwa ukuze baqale ukwelashwa kanye balahle induna, udinga ukusungula izizathu nesenzakalo yabo. Ake ucabangele ezinye zazo:
ukungalingani hormone. Kulokhu, nezinduna encane ebusweni kungenzeka kubangelwa isabelo anda fat nokukhuphula ezimbotsheni ebusweni e intsha. Lezi zinguquko ezihlobene nokukhula ukuthi uthathe indawo ngesikhathi esifanele. Nokho, kuthiwani uma inkinga iqhubeka futhi kuqale inkathi usukhule kakhudlwana, kufanele ucabange ukwehluleka hormone emzimbeni. nezinduna Small ebusweni ingavela abesifazane esesikhathini noma menopause kanye ngenkathi ethatha izinto zokuvimbela inzalo.
Ufuzo. Ngokuvamile khona ukuqubuka esikhumbeni idluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Isizathu kungaba, futhi izifo sitholwa njengefa.
Ukudla esingalungile. It kuholela ngokweqile noma, Ngakolunye uhlangothi, ngenxa yokuswela amavithamini. Isikhumba kakhulu sensitive ushintsho olunjalo, futhi kungani kukhona nezinduna encane ebusweni. Isizathu kungaba, futhi uphuza imithi.
Ukuba khona ezidala emzimbeni. Ngaphezu ukuqubuka, bangakwazi kungababangela ezinye izifo.
uhlevane ezincane abomvu ebusweni kungaba futhi ukubonakaliswa yokungezwani komzimba noma ngenxa ukuvuvukala emzimbeni. Ngokuvamile, imbangela izifo esiswini noma diathesis;
Small nezinduna emhlophe ebusweni cishe kube Whitehead. Vuka ngenxa odla we ikhule ezimbotsheni sebum. Abanaso kubangele ukushisa, kodwa uwasuse ekhaya wukuthi ayilula kangako. Ukuze wenze lokhu, kungcono ukuxhumana ochwepheshe. Ngaphandle, abaprofethi bamanga kuyinto obukhulu kancane ibhola omhlophe. Ngokuvamile waphawula ezizungeze amehlo, phezu amathempeli ku Isivalo.
Umthelela izici ezingezinhle zangaphandle ingabagulisa ukubukeka nezinduna. Lokhu kungenxa komoya, umswakama high, noma ukushisa.
Ukucindezeleka nokungalali kubangela ukukhululwa kwe-adrenaline egazini, nakho kunomthelela ukubukeka ukuqubuka esikhumbeni.
Umkhuba push nezinduna ekhona kwasithinta kakhulu nge ukuvela emisha. Ngaphezu kwalokho, ngezandla ezingcolile, ungakwazi ukwengeza enye ukutheleleka isilonda.
Ukuhlonza imbangela eqondile kufanele bafune usizo lobuchwepheshe (Cosmetology, ukusebenza kwayo nezifo zabesifazane, nezesikhumba, Endocrinology, Gastroenterology noma Udokotela awe-aleji).
Kufanele ufunde indlela efanele yokunakekela isikhumba sabo, zikhetha izinga Okuwukuphela kwezinto ezingokwemvelo. Kufanele ukufanisa isikhumba sakho hlobo.
nezinduna Small ngobuso bakho uzonyamalala ngokushesha kakhulu uma unamathela umsoco ofanele: balahle ukudla okungenampilo kanye utshwala nokubhema, kanye ekudleni kwakho ukufaka izithelo nemifino.
Kuyini volleyball? imiqondo Basic nezincazelo volleyball
Udlame e umndeni: izigaba, izinhlobo, zokuvimbela
Yamalahle Ukraine. Izimayini zamalahle e-Ukraine. A ton of amalahle: intengo